Nahazo ny galona general de division kosa ny jeneraly 45. Nosinganina manokana ireo jeneraly efa mitazona andraikitra ka nitombo grady, ary anisan’ireny ny jeneraly Florens Rakotomahanina lehiben’ny fari-piadidian’ny zandarimariam-pirenena ho an’Analamanga. Mahagaga ihany ny fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena, izay tompon’ny teny farany amin’ny fampiakarana galona toy izao. Raha ny fahitan’ny mpanara-baovao azy mantsy dia toa tsy dia manaraka ny dingana ara-dalàna sy ara-drariny ny ankamaroan’ny fampiakarana laharam-boninahitra, raha tsy hilaza afa tsy ny jeneraly Rakotomahamanina Florens, izay vao ny taona 2014 no kolonely kanefa efa tafakatra “general de division” sahady noho ny fiarovana ny fanjakana HVM. Efa mivoaka tsikelikely ny vaovao ankehitriny fa hisedra olana goavana ny fanjakana ny taona 2017, anisan’izany ny mety hisian’ny fanonganam-panjakana. Efa malaza amin’ny fandravana hetsi-bahoaka sy mpiaro mahatoky ny fitondrana ny ankamaroan’ireo vao nakarina galona, ka mba ho fampirisihana azy ireo hiaro hatrany ny fitondrana no tanjona. Efa manomboka mivoaka rahateo ny vaovao fa mety hafampana ny toe-draharaha vao migadona eo ny taom-baovao ary mety ho tonga any amin’ny fanonganam-panjakana mihitsy ny tantara noho ity fitondrana ity efa tsy te hahalala ny hevitry ny mpanohitra noho ny fahatokisan-tena sy fizahozahoana diso tafahoatra.